DV lottery - MYSTERY ZILLION
November 2008 edited March 2009 in Internet & Email
ဒီကနေ တင်ရပါတယ် ပေါက်ရင်လဲ မမေ့ရဘူးနော်။ Dec 1 ရက်နေ့နောက်ဆုံးပဲ
[FONT="]♫♪[/FONT] ♥ ♥ အိုး .... DV Lottory များပေါက်လို့ကတော့လေ ... Istine ညီမလေးကို ခိုးပြီး ... America ကိုသွားပစ်လိုက်မှာ [FONT="]♫♪[/FONT] ♥ ♥
( ညမီးအိမ် တော့ အသဲကွဲကျန်ခဲ့မှာ ... ကရော် ... ကရော် ... :36: )
Istein မှာ ညီမလဲ မရှိဘူး အမလဲ မရှိဘူး Istein ကတဦးတည်းသောသမီး အဲလေ သား။ အဲ စိတ်ဓာတ်တော့ မကျပါနဲ့ အဒေါ် အပျိုကြီးတွေတော့ရှိတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင် ပြောလေ:D
အစ်ကိုတို့ရေ dv ပေါက်လို့ အပျိုကြီးမကလို့ ညီမလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ယူရပါစေ။ dv ပေါက်ရင် ပြီးတာပဲ
Dv တော့ ကြိုးစားပြီးထဲ့ကြဗျို။ အရင်နှစ်တွေထက်တော့ အလားအလာ ပိုရှိမယ်ထင်လို့ပါ။ ကျွှန်တော်ကိုယ်တိုင်က မထည့်ရသေးဘူး။
အလားအလာသိပ်ရှိတာပေါ့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်စလုံး မြန်မာက အယောက် 400 ကျော်ပေါက်တယ်။ ကျနော်ဆို DV သာပေါက်မယ်ဆိုရင် Bill Gates သမီးယူရရင်ယူရပလေ့စေ (နည်းများနည်းနေမလားမသိဘူး):D
November 2008 edited November 2008 Registered Users, Moderators
အန် မသိရင် ကို Istine ညီမ နဲ့ ကျွန်တော်က ဘာလိုလို ညာလိုလို အနော့်ကောင်မလေးတွေ့လို့ပြဿနာရှာရင် ကို Alexander ညီမကိုပြောင်းချစ်လိုက်မှာနော် :P
Istine ညီမလေးကို တကယ်မချစ်တော့ဘူးဆိုရင် ... ... ... :39:
Alexander ညီမလေးကို လာချစ်လို့ရပါတယ် ... ... ... ဟဲဟဲ :5:
( သဘောကောင်းတာပေါ့ Alexander ကညီမမှမရှိတာ ... ဟဲဟဲ ... လိုချင်ရင်တော့ ညီလေးရှိတယ်။ ဆေးကျောင်း Final Part One ရောက်ပြီ။ ... ... ... MZ မှ ကောင်မလေးများ တန်းစီရန် ....... :P )
အပေါ်က အကိုကြီး နှစ်ယောက်နော်။ မရှိပါဘူးဆိုမှပဲ။ Istein နာမည်တော့မှန်အောင်ပေါင်းပေါ့နော်။ သူတို့သောက်သောက်နေတဲ့ Ovaltine နဲ့မှားနေပြီ ထင်တယ်နော်။:106: ကိုညလေးရည်းစားက ကိုဝင်းဦး (ခေါ်) Daddy Ba Aung သမီးတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော်။ သူလေးက ကျနော် ကြိုပွိုင့်ဆွဲပြီးသားနော်။:71: ဒါပဲနော် သူများကောင်မလေးကို မပြစ်မှားရဘူးနော်။ တော့ပစ်တောင် Istein လုပ်တာနဲ့ပဲ တော်တော်ချော်နေပြီ။ တော်ကြာ Istein ဒက်ဒီကြီး အကြော် ပန်းကန်လာဖိတ်မှ အကြော်မစားချင်ပဲ အားနာပါးနာစားနေရအုံးမယ်။:D
ဦး ဦး ဝင်း ဦး ဆီမှာ မမွေးသေးတဲ့ သမီးရှိုတယ်တဲံ့ ဘာလဲ ကြိုပြီး ကြိုပွိုုင့်ရိုက်နေကြတာလား
မောင်ညလေး ရေ ဂျီမေး မပေးရင် ဖွလိုက်မှာနော်
ကဲကဲ အပြောင်အပျက်တွေတော်ကြရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ် ဦးတည်ချက်လဲတော်တော်လွှဲနေပြီး။ ကျွန်တော်လဲနောက်တော့ဘူး။ အားလုံးလဲမနောက်ကြနဲ့တော့ peace :67: အက်ဒမင်ကြီးတွေလာဆူနေဦးမယ်။
ကို Istein ရေ၊ ကိုဘီးတော့ DV ပေါက်ရင် သွားဖို့လမ်းစရိပ်မရှိလို့ မဖြည့်တော့ဘူ။
အမေရိကသွားဖို့ စုစုပေါင်း မြန်မာငွေ သိန်းနှစ်ဆယ်ထက်ပိုမကုန်ပါဘူး။ တချို့ဆို us $ 30000 ပေးပြီးတောင်သွားနေကြသေးတာပဲ။ တင်ကြည့်လိုက်ပါလား။ သွားမသွားက နောက်မှဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်။
Find out DV Lottery Fake or Real!!	ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းက DV Lottery တင်လို့ရတယ်ပြောလို့ ၊ ကျွန်တော် အံ့သြသွားတယ်။ ဒီဗွီတင်ဖို့ ပိတ်တာကြာလောက်ပြီထင်တာပဲ၊ ကျွန်တော်တင်တာကလည်း စောနေတာကိုး။ ကျွန်တော်ကလည်း ဘာရယ်မဟုတ်၊ အင်တာနက်ဆို အသစ်အစမ်းဆို လုပ်ချင်သပါ့။ ဒါနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီ၊ ကိုယ့်ဟာကိုတင်ကြည့်တယ်။ အဆင်ပြေနေတာပါပဲ။
ဒီဗွီတွေက အတုတွေများပါတယ်။ အစစ်ကို ဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုရင် http://www.travel.state.gov ဒါကိုမြင်တာနဲ့ အစစ်ဆိုတာ သိရှိနိုင်ပါတယ်။ အနောက်မှာ .state.gov ဆိုတာ ပါရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆင်တူရိုးမှား ဆင်တူ ကွန်ယက်ပုံစံတူတွေ အင်တာနက်မှာရှိပါတယ်။ အဲလိုတွေ့လိုက်ရင် လိပ်စာအနောက်ကို သေချာကြည့်ပါ .state.gov မပါရင် အတုပါပဲ။ ဘာလို့ အတုလို့ ပြောရသလဲဆိုတာ ဒိုမိန်းတစ်ချို့ဟာ နိုင်ငံတော်က စီစစ်ပြီးမှ ချပေးတဲ့ ဒိုးမိန်းတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ .gov နဲ့ ရဖိုးအတွက်ကတော့ အခက်ဆုံးပါပဲ၊ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူက နိုင်ငံတော်နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ ကွန်ယက်များကိုသာ ချပေးပါတယ်။ အခြားဘယ်သူ့ကိုမှ .gov အသုံးပြုခွင့်မပေးပါဘူး။ အဲလိုပဲ .mm , .my. .fi စသဖြင့် နိုင်ငံပိုင် ဒိုမိန်းတွေဟာလည်း ဒီနည်းအတိုင်းပါပဲ။ ခိုင်မာတဲ့ အထောက်အထားပြမှာသာလျင် ဒိုမိန်းတွေ ချပေးတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ. ပညာရေး ဒိုးမိန်း၊ အဖွဲ့အစည်း ဒိုးမိန်း www.abnsa.fi ဆိုပါတော့ .. နောက်က .fi ရဖို့အတွက် ကို အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ကြောင်း၊ တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်မှတ်တွေတင်မှ ဒိုးမိန်းကို နိုင်ငံတော်က ပေးပါတယ်။ ဒီတော့ အတုလုပ်တဲ့သူတွေဆို နိုင်ငံတော် ဒိုးမိန်း ချမပေးပါဘူး။ အမေရိကန် ဌာနတွေရဲ့ လိပ်စာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် တော်တော်များများ .gov ပါပါတယ်။လိပ်စာအတုတွေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ စာရင်းတွေ ပေးမိရင် သူက ပိုက်ဆံ တောင်းတတ်ပါတယ်။ မင်းအတွက် နောင်နှစ်အတွက် ဖောင်တင်ပေးမယ် ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ပေးပါတို့၊ ဘာတို့ ညာတို့ လာပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခါ တစ်ခါ ဒီဗွီပေါက်တယ်ဆိုပြီးတော့တောင် လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီဗီဆိုတာ ၁၀ လပိုင်း နဲ့ ၁၂ လပိုင်းအတွင်းမှာ အခမဲ့ အွန်လိုင်းကနေ ဖောင်တင်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ ပိုက်ဆံတောင်းသမျှ၊ .state.gov မပါသည့် လိပ်စာမှန်သမျှ အတုတွေပါ။
ရလဒ် ကို ၂၀၁၁ အတွက် လျှောက်လွှာကို ၂၀၀၉ မှာ လျှောက်ရမှာဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၁၀ မှာ အောင်စာရင်းထွက်ပါတယ်။ မဲပေါက်သလား မပေါက်သလားပေါ့။
ပေါက်တယ်ဆိုရင်လည်း ကံကောင်းပြီ မထင်နဲ့ဦး၊ လေယဉ်လက်မှတ် ဘာညာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဝယ်သွားရတာပါ။ ဟိုရောက်ရင်တော့ အလုပ်လုပ်ဖို့ ပြင်ပေတော့ပေါ့။
တင်တဲ့အခါမှာ ဓါတ်ပုံကို သူတို့ သက်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း သေချာလုပ်တင်ရပါတယ်။ မဟုတ်ရင် မဲပယ်ခံရပါတယ်။
Department of State Warns of Impostor or Fraudulent Websites
The Department of State, Visa Services advises the public that only internet sites including the ".gov" indicator are official government Websites, for our agency offices located in the United States. We are proud to have more than 200 Embassies worldwide. While many of these Embassy Consular Section Websites have the ".gov" indicator in their internet address,anumber do not. The Department of State, Visa Services website does link directly to all Embassy Consular Section Websites abroad at U.S. Embassies and Consulates . This isauseful way for the public to access Consular Section Websites. Visa applicants are advised to be cautious in all dealings with companies that claim to offer any assistance in obtaining U.S. visas. Please note the following:
Immigration Related Websites. Many other non-governmental Websites (e.g., using the suffixes ".com," ".org" or ".net") provide legitimate and useful immigration and visa related information and services. Regardless of the content of other Websites, the Department of State does not endorse, recommend or sponsor any information or material shown at these other Websites.
Other Impostor or Fraudulent Websites and Email. A few other Websites may try to mislead customers and members of the public into thinking they are official Websites. These Websites may attempt to require you to pay for services such as forms and information about immigration procedures, which are otherwise free on the Department of State Visa Services Website, or overseas through the Embassy Consular Section Websites. Additionally, these other Websites may require you to pay for services you will not receive. These web sites may contact you by email to lure you to their offer. Additionally, be wary of sending any personal information that might be used for identity fraud/theft to these websites.
A Few Words about the Diversity Visa Program. There have been instances of fraudulent websites posing as official U.S. Government sites. Some companies posing as the U.S. Government have sought money in order to "complete" lottery entry forms. To learn more, please see the Federal Trade Commission Warning . Applicants selected in the Diversity Visa random drawing are notified by the Department of State, Kentucky Consular Center by letter, NOT email and are provided instructions on how to proceed to the next step in the process. No other organization or company is authorized by the Department of State to notify Diversity Visa lottery applicants of their winning entry.
For more information about international scams involving Internet Dating, Inheritance, Work Permits, Overpayment, and Money-Laundering please visit our International Financial Scams page.
How Do I Report Internet Fraud or Unsolicited Email? If you wish to fileacomplaint about Internet fraud, please see the econsumer.gov Website, hosted by the Federal Trade Commission, which isajoint effort of consumer protection agencies from 17 nations at http://www.econsumer.gov/english/ or go to the Federal Bureau of Investigation (FBI) Internet Crime Complaint Center (IC3). To fileacomplaint about unsolicited email, contact Department of Justice contact us page. အောင်မြင်ကြပါစေဗျာ